musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » J&J COVID Booster Vaccine Iye zvino Inowana Green Light
Johnson & Johnson vakazivisa kuti US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), yakurudzira mushonga wayo weECOVID-19 sechinosimudzira kune vese vanhu vanokodzera vanogashira mushonga unobvumidzwa COVID-19.
"Kurudziro yanhasi inotsigira kushandiswa kwejekiseni raJohnson & Johnson COVID-19 sechinhu chinosimudzira vanhu vanokodzera muUS zvisinei nekuti vapihwa mushonga upi," akadaro Paul Stoffels, MD, Mutevedzeri Wachigaro weKomiti Diki uye Chief Scientific Officer ku Johnson & Johnson. Mushonga weJohnson & Johnson wakapa 94 ​​muzana yekudzivirira muUS kurwisa COVID-19 payakapihwa seyokukurudzira ichitevera kamwechete jekiseni raJohnson & Johnson, uye nekuda kwekuita kwayo kwakasiyana, inopa dziviriro inogara kwenguva refu. Tinoramba tine chivimbo nekubatsira kwachichapa kumamiriyoni pasi rese. ”
Mushonga weJohnson & Johnson COVID-19 wakakurudzirwa sechisimudziro chevakuru vane makore gumi nemasere zvichikwira vakagashira mushonga weJohnson & Johnson kamwe-kamwe mwedzi miviri yapfuura. Chirwere chekuwedzera chemushonga waJohnson & Johnson COVID-18 wakakurudzirwawo kune vanhu vakuru vanokodzera kwemwedzi mitanhatu zvichitevera muyero wechipiri wemishonga inobvumidzwa yemRNA.
Kurudziro yeACIP yakaendeswa kuna Director weCDC uye US department reHutano neHuman Services (HHS) kuti vadzokorore nekutora.
Mushonga wekambani kamwe-kamwe COVID-19 jekiseni rakagamuchira FDA Emergency Use Authorization yevakuru vane makore gumi nemasere zvichikwira musi waFebruary 18, 27. Musi waGumiguru 2021, 20, iyo FDA yakabvumidza yekushandisa zvechimbichimbi pfuti yemushonga we Johnson & Johnson COVID-2021 kune vanhu vakuru vane makore gumi nemasere zvichikwira mwedzi miviri mushure mekudzivirira kwekutanga nemushonga wedhizaini wekambani.
Janssen COVID-19 Vaccine inobvumidzwa kushandiswa pasi peEmergency Use Authorization (EUA) yekudzivirira hutachiona kudzivirira Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) inokonzerwa neakanyanya kufema kufema chirwere coronavirus 2 (SARS-CoV-2) kupa:
• Chirongwa chekudzivirira chepuraimendi yeJanssen COVID-19 Vaccine idosi-imwe (0.5 mL) inopihwa kune vanhu vane makore gumi nemasere zvichikwira.
• Janssen COVID-19 Vaccine booster dose (0.5 mL) inogona kupihwa mwedzi miviri mushure mekubaiwa nhomba kune vanhu vane makore gumi nemasere zvichikwira.
• Chipenga chimwechete cheJanssen COVID-19 Vaccine (0.5 mL) chinogona kupihwa seheterologous booster dose zvichitevera kupedzwa kwekudzivirira kwekutanga nemumwe mushonga wakabvumidzwa kana kubvumidzwa COVID-19. Huwandu hwevanhu (s) vanokodzera uye nguva yekumisikidza yeiyo heterologous booster dose yakafanana neiya yakapihwa mukana wekusimudzira mushonga wekurapa wekutanga.
INOKOSHA INFORMATION INFORMATION
UNOFANIRA KUZIVA CHII KUNE MUDZIDZISI WAKO WEKUCHENJWA usati wawana iyo JANSSEN COVID-19 VHIDHI?
Udza mupi wekudzivirira nezve zvese zvako zvehutano, kusanganisira kana iwe:
• uine chero allergies
• kuva nefivhiri
• ane chirwere chekubuda ropa kana ane ropa rakatetepa
• unodzivirira muviri kana kuti uri pamushonga unobata immune system yako
• vane pamuviri kana kuronga kuva nepamuviri
• vari kuyamwisa
• vagamuchira mumwe mushonga weCOVID-19
• ndakambofenda ndakabatana nejekiseni
NDIANI ASINGAFANIRA KUWANA JANSSEN KOVHIDI-19 VHUDZI?
Haufanire kuwana Janssen COVID-19 Vaccine kana iwe:
• akarwara zvakanyanya mushure mekudzivirira mushonga uyu
• akave neakanyanya kukanganiswa nemushonga wechirwere ichi.
JANSSEN COVID-19 VHASINI INOPIWA SEI?
Janssen COVID-19 Vaccine uchapihwa kwauri sejekiseni mumhasuru.
Kuchengetwa kwekutanga: Iyo Janssen COVID-19 Vaccine inoitwa seyero imwechete.
• Chirwere chimwe chete cheJanssen COVID-19 Chirwere chinogona kupihwa mushure memwedzi miviri mushure mejekiseni rekutanga neJanssen COVID-19 Vaccine.
• Chirwere chimwe chete cheJanssen COVID-19 Chirwere chinogona kupihwa kune vanhu vanokodzera vakapedza kubaya nhomba nemushonga weCCVID-19 wakapihwa mvumo. Ndokumbira utarise nemubatsiri wako wezvehutano nezve kukodzera uye nguva yeiyo inosimudzira dosi.
NDedzipi njodzi dzeJANSSEN COVID-19 VHAKINI?
Mhedzisiro iyo yakataurwa pamwe neJanssen COVID-19 Vaccine inosanganisira:
• Injection saiti saiti: kurwadziwa, kutsvuka kweganda, uye kuzvimba.
• General mhedzisiro mhedzisiro: kurwadziwa nemusoro, kunzwa kuneta zvakanyanya, mhasuru kurwadza, kuda kurutsa, kupisa muviri.
• Makumbo ekuzvimba emimba.
• Ropa rakagwamba.
• Kunzwa kusingajairike paganda (senge kurira kana kunzwa kunokambaira) (paresthesia), kuderera kwekunzwa kana kunzwisisika, kunyanya muganda (hypoesthesia).
• Kuramba uchingorira munzeve (tinnitus).
• Manyoka, kurutsa.
Yakanyanya Allergic Reaction
Pane mukana uri kure wekuti Janssen COVID-19 Vaccine inogona kukonzera kukanganiswa kweakanyanya. Kurwara kwakanyanya kunoitika mukati memaminetsi mashoma kusvika paawa rimwe mushure mekuwana mushonga weJanssen COVID-19 Vaccine. Nechikonzero ichi, mupi wako wekudzivirira anogona kukukumbira kuti ugare panzvimbo yawakagamuchira mushonga wako wekutarisa mushure mekubaiwa. Zviratidzo zveakanyanya kusagadzikana maitiro zvinogona kusanganisira:
• Kunetseka kufema
• Kuzvimba kwechiso chako nehuro
• Kurova kwemoyo kunokurumidza
• Bundu rakaipa muviri wako wese
• Dzungu uye kushaya simba
Ropa rinovhara neakadzika maPlatelet
Kuvharwa kweropa kunosanganisira mitsipa yeropa muuropi, mapapu, dumbu, uye makumbo pamwe chete nemazinga akaderera emaplatelet (masero eropa anobatsira muviri wako kumisa kubuda kweropa), akaitika kune vamwe vanhu vakagamuchira Janssen COVID-19 Vaccine. Mune vanhu vakagadzira aya masaga eropa uye mashoma maplatelet, zviratidzo zvakatanga angangoita imwechete kana maviri-vhiki mushure mekubaiwa. Kumhan'arira kweaya maropa eropa uye mashoma maplatelet anga ari akakwirira mukati memadzimai makore gumi nemasere kusvika makumi mana nemapfumbamwe. Mukana wekuti izvi zviitike uri kure. Unofanirwa kutsvaga kurapwa nekukurumidza kana uine chimwe chezviratidzo zvinotevera mushure mekugamuchira Janssen COVID-18 Vaccine:
• kurwadziwa pachifuva,
• Kuzvimba kwegumbo,
• Kurwadziwa mudumbu,
Kushungurudzika kana kuramba uchirwadziwa nemusoro kana kusaona zvakanaka,
• Kupwanya kuri nyore kana zvidiki zveropa pasi peganda kuseri kwenzvimbo yejekiseni.
Izvi zvinogona kunge zvisiri zvese zvinokanganisa mhedzisiro yeJanssen COVID-19 Vaccine. Zvakakomba uye zvisingatarisirwi mhedzisiro zvinogona kuitika. Janssen COVID-19 Vaccine ichiri kuongororwa mumakiriniki ekuedzwa.
Guillain Barré syndrome (chirwere chetsinga umo masoja emuviri anokanganisa maseru etsinga, zvichikonzera kushaya simba kwemhasuru uye dzimwe nguva kuora mitezo) kwakaitika kune vamwe vanhu vakagamuchira Janssen COVID-19 Vaccine. Mune vazhinji vevanhu ava, zviratidzo zvakatanga mukati memazuva makumi mana nemaviri zvichitevera kugamuchirwa kweJanssen COVID-42 Vaccine. Mukana wekuti izvi zviitike wakaderera kwazvo. Unofanirwa kutsvaga kurapwa nekukurumidza kana iwe ukagadzira chero cheanotevera zviratidzo mushure mekugamuchira iyo Janssen COVID-19 Vaccine:
Kushaya simba kana kugwinha, kunyanya mumakumbo kana maoko, izvo zviri kuwedzera uye zvichipararira kune dzimwe nhengo dzemuviri.
• Kunetsa kufamba.
• Kuoma nekufamba kwechiso, kusanganisira kutaura, kutsenga, kana kumedza.
• Kuona kaviri kana kutadza kufambisa maziso.
• Dambudziko nekudzora dundira kana ura.
NDINOFANIRA KUITI NEI PAMUSORO PEMAHARA?
Kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinga
Fonera mupi wekudzivirira kana mupi wako wezvehutano kana iwe uine chero mhedzisiro inokunetsa kana kuti isingaendi.
Mhan'ara majekiseni emigumisiro kune FDA / CDC Vaccine Yakashata Chiitiko Kuzivisa System (VAERS). Iyo VAERS isingabhadhari nhamba ndeye 1-800-822-7967 kana kuzivisa online kune vaers.hhs.gov. Ndokumbirawo usanganise "Janssen COVID-19 Vaccine EUA" mumutsara wekutanga webhokisi # 18 yefomu yemushumo. Uye zvakare, unogona kuzivisa mhedzisiro kuJanssen Biotech Inc. pa1-800-565-4008.
NDINOGONA KUGAMUCHIRA JANSSEN KOVHIDI-19 VHIDHARA NENGUVA YAKAFANANA SEZIMWE VHEDZI?
Dhata haisati yaendeswa kune FDA pane manejimendi yeJanssen COVID-19 Vaccine panguva imwecheteyo seimwe majekiseni. Kana iwe uri kufunga kutambira Janssen COVID-19 Vaccine nemamwe majekiseni, kurukura zvaunogona kuita nemupi wako wezvehutano.